I-Marek Hamsik Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL I-Marek Hamsik Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
Igqityelwe ukuvuselelwa kwi Agasti 26, 2018
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGlaus Genius eyaziwayo ngegama lesidlaliso "Marekiaro". Ibali lethu le-Marek Hamsik yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuzisa i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, imvelaphi yentsapho, ubuhlobo bentsebenziswano, kunye nezinye iinjongo ze-OFF (ezingaziwa) malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nenjongo yakhe yokunika amanqaku kwaye ancedise amandla kodwa abambalwa bajonga i-Marek Hamsik ye-Bio enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
I-Marek Hamsik Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts-Ubomi Bokuqala Nentsapho
UMarkk Hamsik wazalelwa ngomhla we-27 ngoJulayi 1987 eBanska Bystrica, eSlovakia. Wazalelwa kunina, uRenata Hamsik kunye noyise uRichard Hamsik.
Ukukhula kwiBanska Bystrica (echazwe ngezantsi), idolophu eyaziwayo ngokubaluleka kwayo kweMigodi kunye nezakhiwo ze-Historical, u-Oblak omncinci wayezungezwe nothando oluvela kwintsapho yakhe enothando yemidlalo eyamnceda ukuba ambeke endleleni yakhe yokuphila ekuqaleni kwentsapho.
Umama kaHamkik wayengumdlali wesikhokelo sangexesha elilodwa ngoxa uyise wayengumthetheli weqela laseSlovakia elinesibini ngexesha lokuzalwa kwebhola lebhola. Ukuze uzalise intsapho yezemidlalo, udadewabo kaHamkik, uMikhaela wayengumdlali webhola lebhola lomdlalo odlalele iqela lakubo, iBanská Bystrica.
Kwakungokwemvelo ku-Hamsik oye wathonywa nguyise ukuba acinge ngemisebenzi kwibhola lebhola. Uxhaswa ngezobuchwephesha -Koyiphi ubaba, uHamsik wathatha amanyathelo akhe okuqala ekujoliseni ubugcisa ngendlela engavumelekanga ngokubhalisa kwiqela elincinci lentsha, uJupie Podlavice kunokuba aqale kwiqela lakhe lakuloo ndawo, iDukla Banská Bystrica.
I-Marek Hamsik Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts-Career Buildup
Ukudlala iJupie Podlavice kwanikezela uHamki ikhono elifunekayo elifunekayo lokuba ahambe kakuhle kumaqela amancinci atshabalalayo phakathi kwayo eyayiyiSlovan Bratislava, iqela likaHamsik liqhubela phambili kwi-2002 phantsi kweemeko njengoko wayeyakhumbula iminyaka kamva:
'Ndikweleta yonke into kubazali bam. Nangona sasingowona usapho ocebileyo, abazali bam bahamba ubude bexhasayo, kuquka ukuthengisa imoto kuphela esasinayo ukuze ndidibanise noSlovan Bratislava xa ndandineminyaka eyi-14.
U-Hamsik wayengowona ulungelelaniso lwabazali bakhe njengokuba wenza konke okusemandleni akhe okubonakalisa ngokuphindaphindiweyo kwezihlandlo ezithandathu kwiSlovan ngaphambi kokuba atshintshele kwi-Club yaseNtaliyane eBrescia kwi-2004.
Ukuqala ngeqela le-19, i-Hamsik yakhupha ukunyuka kweemeteor ngokwemigangatho yokwenza i-Serie A yayo yokuqala kwi-2005 kodwa ayizange ihlonishwe njengeBrescia njengoBrescia ehlulekile ukuphepha ukunyuswa kwalo nyaka.
Nangona kunjalo, uHamkik waqhubeka nefomu yakhe ephezulu eya kubona uNapoli ishidi emva kokuba ebhale iinjongo ezilishumi kwi-40 Serie B.
I-Marek Hamsik Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts-Ukunyuka Kwegama
KwakuyiNapoli ukuba uHamkk wayenelungelo lokuqwalasela eliqale ngokukhawuleza emva kokufumana kwakhe ekuqaleni kukaCesena kwiCoppa Italia. Emva kweenyanga ezintathu kunye noNapoli wambona efikela injongo ukugqithisa irekhodi leMaradona njengegosa elihamba phambili.
Kungekudala ngaphambi kokuba uHamsik athole ibhaso lomdlali omncinci kakhulu kwiSerie A eyaziwa ngokuthi 'u-Oscar del Calcio' ngoJanuwari 2009. Ibhaso yowokuqala kohlobo lwayo ukuba unikezwe kumdlali ngaphandle kweengcambu zaseItaliyane. Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali.
I-Marek Hamsik Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts-Ulwalamano lobomi
Umntu ocinga ngeempendulo eziphindaphindiweyo zezenzo kunye nolwalamano olukhethiweyo oluya kwintsapho aluyi kufunda ngokubanzi ubomi bukaHamkik oye wanyathela umendo wakhe (umqhubi webhola wangaphambili) ngokuthandana nokutshata nomdlali webhola lebhola ( imidlalo efanayo ukuba unina kaHamsik wayebandakanyeke ngenxaxheba).
U-Hamsik wayekade enobudlelwane obude kunye nentombi yakhe okanye inkabi yajika umfazi, uMartina Franova.
UMartina Franova wayengumdlali webhola lomdlalo odlalela idolophu yakubo, iBanská Bystrica kunye nodadewabo kaHamsik, uMichaela. Ulwalamano lwababini lwasuka ngelixa uHamsik wayeseBrescia kwaye uye waqhakaza ukususela ngelo xesha.
Esi sibini senziwa iminyaka ngaphambi kokuba sitshatile ngomhla we-4th kaJulayi 2014.
Umanyano wabo usikelelwe ngabantwana ababini abangamaKristu kunye noLucas (owazalwa ngu2010 no-2012) kunye nentombazana uMelissa, owazalwa ngoDisemba 2017.
Ngoxa ababini oonyana babenomdla wokuqalisa umdlalo webhola kwi-academy ehlobene ne-Udinese, abalandeli abanakuze balinde ukubona ukuba uMelissa uza kugcina umzekelo wezemidlalo yentsapho ngokudlala ibhola.
I-Marek Hamsik Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts-Ulwahlulo oluthile
NgoNovemba 2011, umfazi okhulelweyo kaHamkik, uMartina Franova, waphangwa ngombhoxo, wahlutha izinto zakhe ezixabisekileyo kwaye kwakhona washiya e-Naples emva kokuba abaphangi bebehamba kwi-BMW wayekhwele.
Isiganeko esenzeke kwiiyure ngaphambi kokuba umdlalo we-Napoli weMidlalo yaseManchester City ungenzi nto ukuphazamisa uHamsik odlala umdlalo ngokugxininisa ngokupheleleyo.
Ukukhawuleza kwi2013, Hamsik yaphangwa ngelixa uqhuba ngokulandelelana kwe-Napoli yokudweba okungapheliyo kuSampdoria. Abaphangi babecelwa ukuba bayeka baze baqhekeza iglasi leemoto zikaHamsik ngaphambi kokuba bafake isibhamu ebusweni bakhe.
U-Hamsik wasala engenakho ukhetho kodwa ukunyanzelisa iimfuno zabo njengoko bebhenxise umlindi wesandla phakathi kwezinye izinto ezixabisekileyo.
I-Marek Hamsik Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts-Ukunyaniseka kwiKlabhu
Nangona abadlali abakhulu abaquka u-Edinson Cavani, u-Ezequiel Lavezzi noGonzalo Higuain bashiye 'iiklabhu ezinkulu', u-Hamsik wanquma ukuhlala naphezu kwentuthuko eyenziwe ngamacandelo eNgesi ukuba amtyikitye kunye neziganeko zokuphanga kwakhe kunye nomfazi wakhe okhulelwe. Ngenxa yoko, uHamsik ugubha njengesiqhawe samhlanje sikaNapoli emva kokuba uGeorge Maradona ogciniweyo lwamarekhodi eNapoli liye lugqithiswa ngumntu othembekileyo.
I-Marek Hamsik Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts-Hhayi nje iFrey Number
Inombolo yephepha i-17 ibe yinto ebalulekileyo ye-Hamsik ebonakala ibhalwe kwiikiti ezithwele inombolo ngexesha lokubonakala kwazo zombini iNapoli kunye neSizwe leSizwe leSlovakia. Ngokwe-skipper, isibalo esilandelayo senombolo ye-17 idlala indima ngokuphindaphindiweyo kwimini yokuzalwa kunye nexesha lakhe, into ayibonakalisile ngexesha lodliwano-ndlebe nabathengi.
'Ndizalelwe nge-27th yenyanga yesixhenxe (ngoJulayi) ku-1987, kwi-7pm,'
I-Marek Hamsik Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts-Izizathu Ezibhekiselele kwiNickname
Igama lomnxeba kaHamsik, 'uMarkiaro' ubizwa ngegama elithi 'Marke' ngelixa elinye igama elithi "kiaro" lihlawula umvuzo kumanzi ahlambulukileyo olwandle ajikeleze iNapoli apho i-Neapolitans inothando kakhulu.
I-Marek Hamsik Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts-Ubuntu
Kwintsimi yomdlalo, uye wachazwa ukuba ngumdlali osheshayo, onamandla, osebenza kanzima kunye nohlakaniphile, onokukwazi ukudlala kwiindawo ezininzi ezinokukhubaza.
Amandla akhe, ubuchule kunye nobuchule bakhe bobukhokelo bambona ekhonza njengomphathi weqela lakhe laseNtaliyane uNapoli kunye nokukhonza njengomphathi-mphathi weqela lesizwe laseSlovakia.
Ukongezelela, ukuqonda kwakhe kwengqondo kunye ne-aura ye-comic relief ehamba naye impawu eziye zazimisa phakathi kwabanye abadlali kwaye zamenza "ngathi angenakuphika" apho uya khona.
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda i-Marek Hamsík yabantwana bebali kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
INapoli yeDlalo yeDlalo
Luca NgoSeptemba 19, 2018 Kwi5: 41 am
Igama lesiteketiso elithi "Marekiaro" linxulumene nenxalenye encinci yesixeko saseNaples esibizwa ngokuthi uMarechiaro. Ummandla omncinci ngamanzi apho umntu angayibona khona isixeko sonke saseNaples, kuquka iMat. Vesuvius. Kuhle kwaye uMarkk Hamsik unikwe igama lesiteketiso elithi "Marekiaro" kuba ngaphezu kweminyaka ebeyayisimboli kwisixeko sethu kunye neqela. Le nickname yindumiso enkulu, kwaye uHamsik uyazi kwaye uyayithanda. Ukufumana ulwazi olungakumbi, uphando uMarechiaro, Posillipo, eNaples.
I-Samir Nasri Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
Ingxelo kaDonny van de Beek yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
IJaji Martinez Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
USamuel Umtiti Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts